ခင်လွန်း - ဇာတ်ရုပ် ၃ ရုပ် ဇာတ်လမ်းတပုဒ်
on October 15, 2020 သက္ဆိုင္ရာ က႑ - Khin Lunn Literature Short Story
Photo- Mimi Thaw
ဇာတ်ရုပ် ၃ ရုပ် ဇာတ်လမ်းတပုဒ်
(သစ်ခက်သံလွင်) အောက်တိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၂၀
အဘွားကြီးက ပက်လက်ကုလားထိုင်လေးပေါ်ထိုင်ကာ စက္ခုနှစ်လုံးမှေးမှိတ်လျက်ဘုန်းတန်ခိုးကြီးမားလှစွာသော ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါး၏တရားဒေသနာကို သူ့ဖုန်းလေးမှတဆင့် နာကြားနေ၏။
အဘွားကြီး၏အချစ်တော်ကြောင်ကလေးမှာမူကား သူ့ရှေ့ ဟထားသောပြတင်းတံခါးပေါက်မှတဆင့် အပြင်သို့ ထူးကဲစူးရှလှစွာသောကြောင်တို့၏မျက်လုံးအစုံဖြင့်ကြည့်နေရာမှ စောစောလေးတင်ကမှ အဘွားကြီးကျဲပက် ထားသည့် ငှက်စာအစေ့အဆန်လေးများရှိရာ မအူမလည်ရောက်လာလေသော စာငှက်လေးတကောင်ပေါ်သို့ လွှားခနဲ ခုန်ပျံဖမ်းအုပ်လိုက်လေရာ မြင်ကွင်းထဲတွင် ဖွာခနဲလွှင့်ထွက်သွားသည့် ငှက်မွှေးငှက်တောင်အချို့တို့နှင့် အတူ တစုံတခုပိညှပ်ဖိအုပ်ထားခြင်းကြောင့် ရှိသမျှအားကုန် ရုန်းကြွလွန့်လူးရာမှ တဖမ်းဖမ်းတဖျန်းဖျန်း ထွက် ပေါ်လာသည့် တောင်ပံခတ်သံတို့သည်လည်း ဝရုန်းသုံးကားဖြစ်ခါ သွားရလေ၏။
ထိုရောအခါ မျက်လုံးနှစ်လုံးမှေးစင်းလျက် တရားနာနေသည့်အဘွားကြီး၏နှုတ်မှ " ဟဲ့ဟဲ့ မယ်မော်ဒယ်… မယ် မော်ဒယ်..(ကြောင်မလေးအမည်) နင်ဟာလေ. နင်ဟာ ခက် ခက်တော့တယ်ဟာ '" ဟု မြည်တွန်တောက်တီး ၍ ဘုရား ဘုရား ဟု တလိုက်လေသည်။
ခဏအကြာ အရာရာသည် ငြိမ်ဆိတ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ရာ ကြောင်မတမ်းမလေး မယ်မော်ဒယ်သည်လည်းကောင်း၊ အဘွားကြီးသည်လည်းကောင်း၊ အိုခြင်း နာခြင်း သေခြင်း အစဉ်မမြဲမတည်သော သင်္ခါရတရားဒေသနာ လွှင့် ထုတ်ပေးနေသော ၄ ဂျီမိုဘိုင်းဖုန်းလေးသည်လည်းကောင်း ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်အတိုင်း တည်ရှိနေမြဲဖြစ်သော်လည်း စာငှက်လေးတကောင်မှာမူကား. ။ ။